Isbedelka iyo Horumarka ka Tisqaaday Dekeda Berbera & Doorka Maareeye Siciid Xasan Cabdilahi....Warbixin Cali Xuseen Warsame.
Saturday August 29, 2020 - 16:59:42 in Wararka by Super Admin
Sidda lawada ogsoon yahay Aduun weynaha masuulkii muujiya Karti, waxqabad, geesinimo iyo wax kastoo wax Ku ool ah ama uu faciii dheeri muujiyo waxa uu kasbadaa bilad lagu maamuuso, oo lagu sharfo taas oo abaalmarin ahaan loo gudoonsiiyo, siddoo kale wixii ah waxtar ama wax qabad, naf hurid iyo abaal aan la gudi Karin ee shaqsi ama kooxi gasho waxa loo qotimiyaa taalo lagu xasuusto, wanaag iyo wixii ay u galeen dalka.
Hadaba Waxaynu qormadeenan Maanta kusoo qaadan doonaa Waxqabadka salka Balaadhan ee u sadexdii sanaadeed ee u dambeeyey ku talaabsaday ama gaadhsiiyey Maareeyaha Dekedaha Somaliland Eng Siciid Xasan Cabdilahi Dekeda Berbera.
Maareeye Siciid waa masuul aqoonyahan ah, waxanu xilliyo kala duwan shirar Caalamiya uga qaybgalay Dekeda Berbera, Shirarkaas oo ka kala Dhacay Jarmalka ee lagu qiimaynaayey Dekedaha Caalamiga ah, waxanu kasoo sameeyey Saaxibo badan. Waxa kaloo kamid ahaa Shirkii Taarikhiga ahaa ee ka dhacay dalka Tansaniya ee lagaga hadlaayey sidii ay iskaashi u yeelan Lahaayeen Dekeda caalamiga ahi, waxanu Maareeye Siciid ku guuleysatay inuu marsada Berbera ka dhigo mid Caalamiya, kana baxday localnimadii.
Waxa kaloo lama ilaawan dhismaha Dekeda cusub ee Berbera oo gacantii ugu weynayd ka gaystay Maareeye Siciid, waxanu habeen iyo maalin u dabo-gal iyo dhirigelin ku waday mudo laba sano ah, dhowaan ayey dekedu dhamaan doontaa, isagoo Maareeye Siciid noqday shaqsi waxyaabo Tiro badan oo kale kusoo kordhiyey Dekeda sida nalalka Bada ee habeenkii Iftiima, iyadoo maraakibta hada habeenkii lasoo xidho. Sidoo kalena dekedu shaqayso 24 saacadoodba ah' nidaamka shaqaalaha iyo shaqada oo Casriya, taasina waxay fudaydisay inuu laban-laabmo ama sadex jibaarmo hananka shaqo ee dekedu.
Maareeye Siciid Xasan Cabdilahi waxa uu noqday, Maareeyihii koowaad ee ay Mahadisay Dekeda Berbera, waxyaabo Tiro badan oo kale kusoo kordhiyey Dekeda sida nalalka Bada ee habeenkii Iftiima, iyadoo maraakibta hada habeenkii lasoo xidho. Sidoo kalena dekedu shaqayso 24 saacadoodba, nidaamka shaqaalaha iyo shaqada oo Casriya, taasina waxay fudaydisay inuu laban-laabmo ama sadex jibaarmo hananka shaqo ee dekedu. La soco qaybaha dambe.